साइलेन्स बीच - तपाईले खोज्नु पर्ने सब भन्दा सुन्दर ठाउँ मध्ये एक | Absolut यात्रा
त्यहाँ धेरै समुद्र तट क्षेत्रहरू छन् जुन हामी क्यान्ट्याब्रियन समुद्र हाइलाइट गर्न सक्छौं, तर मौन समुद्र तट यो सँधै शीर्ष पदहरू बीच हुनेछ। पहिलो नजरमा सबैभन्दा सुन्दर क्षेत्रहरू मध्ये एक हुनको लागि र यसले हामीलाई शान्तिमय ठाउँ प्रदान गर्दछ, जब हामी समुद्र तट वा पैदलमा दिनको मजा लिन चाहन्छौं।
शान्ति र स्थानले विलासी वातावरण बनाउँदछ, धेरैले प्रशंसा गरे। यो मा स्थित छ अस्टुरियसको पश्चिमी तट, त्यसैले यसले पहिले नै यस ठाउँको सौन्दर्यमा थप्दछ, यो भूमिले हामीलाई प्रदान गर्ने सबै थोक, जुन थोरै छैन। के तपाईं यस स्वर्गको बारेमा थोरै जान्न चाहानुहुन्छ?
1 कसरी प्लेआ डेल सिलेन्सियोमा पुग्ने?
2 हामी यस समुद्री किनारमा के फेला पार्नेछौं
3 दृश्यहरु र समुद्र तट तिर आफ्नो विचारहरु
4 खेलकुदको अभ्यास
कसरी प्लेआ डेल सिलेन्सियोमा पुग्ने?
यो ठाउँ कास्टेरास शहरमा अवस्थित छ, जुन यो Cudillero को काउन्सिल भित्र अवस्थित छ (करीव १ 15 किलोमिटर)। केवल क्षेत्रको उल्लेख गरेर, हामी जान्दछौं कि हामी सपनाको स्थानको सामना गरिरहेका छौं। तपाईं धेरै जसलाई Cudillero चिन्नुहुन्छ पक्कै सोही सोच्नुहुन्छ। ठीक छ, प्रश्नमा समुद्री किनारमा पुग्न हामीले पहिले कास्टेरास शहर खोज्नु पर्छ। त्यहाँबाट, त्यहाँ संकेतहरू हुनेछन् र तपाईंले धेरै स you्केत लिनुपर्नेछ, तर यो लायक हुनेछ।
आइपुग्नु भन्दा चाँडै, हामी एउटा कार पार्क भेट्टाउनेछौं, तर यस अवस्थामा यो भुक्तान गरिएको छ। यसले हामीलाई सुराग प्रदान गर्दछ कि समुद्र तट पहिले नै धेरै नजिक छ। हामी अगाडि बढ्नेछौं र अब सडकको एक मात्र दिशा छ। त्यसैले हामी यसको छेउमा पार्क गर्न सक्छौं। अवश्य पनि, यदि यो एकसंग मिल्छ कि तपाईंले यो फेला पार्न सक्नुहुन्न भने, त्यसोभए तपाईंले उल्लेख गर्नु भएको कार पार्कमा जानुपर्नेछ। एक पटक पार्क गर्नुभयो, तपाईले १० मिनेट जति हिड्नु पर्छ। यो एक टेढो क्षेत्र हो तर यसमा सिढी पुग्न उडानहरू छ समुद्र तटमा पुग्न। यो पैदल पनि यसको लायक छ!
हामी यस समुद्री किनारमा के फेला पार्नेछौं
एक पटक यसमा, सुन्दरता देख्न सकिन्छ र यो वर्णन गर्न गाह्रो छ। तर हो, दिमागमा राख्नुहोस् कि तिनीहरू केहि हुनेछन् समुद्र तट को .२ किलोमिटर लम्बाई, किनभने यो चौडाई मा धेरै सानो छ। यो कुमारी बीचको करीव meters० मिटरको हुनेछ। आराम र रमाईलो गर्न को लागी एक ठाउँ, गर्मीमा पनि यो सधैं धेरै व्यस्त हुँदैन। ढु stone्गाका ठूला ब्लकहरू उनको वरिपरि चट्टानहरू र टापुहरूको रूपमा हेरिरहेका छन्, यस ठाउँलाई ढाक्दै र यसलाई अझ गोपनीयता प्रदान गर्दै।
तर तथ्य यो हो कि यसका साथै ढु the्गा बालुवामा पनि रहेको छ, अझ के छ भने, पहिलो समुद्रको किनारमा पनि दोस्रो भन्दा बढी मुख्य पात्र हुनेछ। निस्सन्देह, पानीमा यो पनि एक प्रकारको प्लेटफर्मको रूपमा देखा पर्दछ। तर यसको लागि धन्यवाद, समुद्र संग संयोजन, हामीलाई एक धेरै अधिक प्राकृतिक, अधिक स्पष्ट र उत्तम रंगको मजा लिन अनुमति दिन्छ। फ़िरोज़ा र पन्ना बीचको यी शेडहरू जुन तपाईं प्याराडिसाकल समुद्र तटमा महसुस गराउनुहुन्छ, यो वास्तवमै जस्तो छ।
दृश्यहरु र समुद्र तट तिर आफ्नो विचारहरु
मुख्य दृष्टिकोण मध्ये एक धेरै नजिक छ समुद्र तटमा पुग्नु अघि सवारी पार्किंग। तपाईले कसरी देख्नुहुनेछ कि कसरी सडकले घुमाउरो बनाउँदछ र त्यहाँ तपाईंले यस ठाउँको नयाँ दर्शन पत्ता लगाउन मार्ग पाउनुहुनेछ। Panoramic फोटोहरू साइलेन्सको बीचमा छोड्न सकिदैन। अवश्य पनि, यस दृष्टिकोणबाट अलि पछि, हामी अर्को भेट्नेछौं। तर यस अवस्थामा, त्यहाँ कुनै संकेत छैन जुन हामीलाई यसमा पुर्‍याउँछ। यो बायाँ पट्टि अवस्थित छ र यदि तपाईंले यसलाई पत्ता लगाउनु भयो भने, तपाईं स्थानको सौन्दर्य पनि देख्नुहुनेछ, अर्को दृश्यबाट।
अवश्य पनि त्यहाँ अन्य रेलहरू छन्, ती मध्ये एउटा पूर्वतिर र समुद्री तट दृश्यबाट, जुन हामीलाई प्रवाहमा र विशाल समुद्रमा देख्न सकिन्छ जुन यस समुद्री तटमा देख्न सकिन्छ, अर्कोलाई परिचय दिन। ला बारकेरा बीच। यद्यपि हामी यसमा तल जान सक्नेछैनौं, हामी धेरै विशेष छविहरू लिनेछौं। यस्तो देखिन्छ कि यस ठाउँका स्थानहरू, हामीलाई उत्तम कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भइरहेको छ।
यस जस्तो ठाउँमा, यो सत्य हो कि हामी सँधै धूपमा डुब्ने रेतीले भरिएको क्षेत्र खोज्दैनौं। त्यसोभए केहि खेलकुदको अभ्यास बढी सामान्य हुन्छ। को पानीमुनि वा खेल माछा मार्ने यो त्यस्तो चीज हो जुन प्लेआ डेल सिलेन्सियो जस्ता क्षेत्रमा मिल्दछ। एकातिर, किनकि यसको पानीहरू सँधै शान्त हुन्छन्, जसले विभिन्न गतिविधिहरूको अभ्यासलाई बढी अनुकूल बनाउँदछ। यसका साथै यसको पानीहरू धेरै क्रिस्टल स्पष्ट छन्। यदि तपाईंलाई डाइभि like मनपराउँछ भने यो तपाईंको लागि उत्तम स्थान हुनेछ। तपाईं समुद्री किनारको दायाँ तिर सुरू गर्न सक्नुहुन्छ, क्लिफ स्किर्टिंग जुन तपाईंलाई केही टापुहरूमा लग्नेछ। त्यहाँ तपाईं आफूलाई डुबाउन सक्नुहुन्छ र सबै समुद्री जीवनहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, जुन सानो छैन, र सुन्दरताले भरिएको छ।
सम्झनुहोस् कि सामान्यतया समुद्र तटको साथ सामान्य रूपमा हुन्छ, तपाईंले भिन्न हुनुपर्दछ कम ज्वार वा उच्च ज्वार। पछिल्लोसँग कम बालुवा क्षेत्र हुने छ तर कम, त्यसमा भेटिने चट्टानहरूमा यति धेरै चरण नगरीकन। जब ज्वार बाहिर जान्छ, त्यसपछि त्यहाँ धेरै बालुवा हुन्छ, तर पानीमा प्रवेश गर्न केही बुटीहरू लिन सल्लाह दिइन्छ। तपाईं चट्टानहरू बीच खोल्न सक्ने केही ठाउँहरूको मजा लिन सक्षम हुनुहुनेछ र यसले नयाँ मूल संरचनालाई जन्म दिनेछ। यदि तपाईं चिसो वा चिसो हुनुहुन्छ भने, तब तपाईंले समुद्रमा प्रवेश गर्ने बारेमा दुई पटक सोच्नुहुनेछ, किनभने पानी एकदम चिसो हुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » मौन समुद्र तट
केडिजको प्रान्तमा के हेर्ने